Bambada Haydarooliga Vane iyo Alaab-iibiyeyaasha & Warshada | China Hydraulic Vane Pump iyo Soosaarayaasha Qaybaha Daboolka
Xirmada kartoonada Vane Pump Cartridge
Awoodda dareeraha Maroodiga ayaa bixisa xirmada kartoonada Vane pump Cartridge 100% oo lagu beddeli karo qaybo oem ah. Waxaan samayn karnaa qaybo kala duwan oo ah bambooyinka hawo-biyoodka leh qiimaha tooska ah ee warshadda waxaanan yeelan karnaa heerar heer sare ah oo qalabka tijaabada ah si ay uga caawiyaan macaamiisha mashruucyadooda.
T6 T7 Taxanaha bambooyin vane
Awoodda dareeraha Maroodiga: Bixi T6 T7 taxane Hydraulic Vane Pump, Waxaan samayn karnaa noocyo kala duwan oo bambooyin biyo ah oo leh qiimayaal warshadeed-tooska ah waxaanan haysanaa qalab tijaabo ah oo mashiinno farshaxan ah si ay uga caawiyaan macaamiisha mashruucyadooda.
Awoodda dareeraha Maroodiga: tayada dammaanad qaadka iyo qiimaha ku habboon, iyo adeegga iibka ka dib oo qumman.
Cadaadis-hooseeya-beddeli karo Vane
Awoodda Dheecaanka Maroodiga: Bixi taxane-kala duwanaansho-hooseeya-Hydraulic Vane Pump, Waxaan samayn karnaa noocyo kala duwan oo bambooyin biyo-biyood ah oo leh qiimayaal-toos ah warshadda waxaanan haysannaa qalab tijaabo ah oo mashiinno farshaxan ah si ay uga caawiyaan macaamiisha mashruucyadooda.
PFE PFED Taxanaha bamka Vane
Awoodda dareeraha Maroodiga: Bixi PFE PFED taxane Haydraulic Vane Pump, Waxaan samayn karnaa noocyo kala duwan oo bambooyin biyo ah oo leh qiimayaal warshadeed-tooska ah waxaanan leenahay heerar heer sare ah oo farsamaynta qalabka tijaabada ah si ay uga caawiyaan macaamiisha mashruucyadooda.
SQP Series bamka vane
Awoodda Dheecaanka Maroodiga: Bixi SQP taxane Hydraulic Vane Pump, Waxaan samayn karnaa noocyo kala duwan oo bambooyin biyo-biyood ah oo leh qiimayaal warshad-toos ah waxaanan haysanaa qalab tijaabo ah oo mashiinno farshaxan ah si ay uga caawiyaan macaamiisha mashruucyadooda.
VQ Series-vane bambooyin
Awoodda dareeraha Maroodiga: Bixi VQ taxane Haydraulic Vane Pump, Waxaan samayn karnaa noocyo kala duwan oo bambooyin biyo-biyood ah oo leh qiimayaal warshad-toos ah waxaanan haysannaa qalab tijaabo ah oo mashiinno farshaxan ah si ay uga caawiyaan macaamiisha mashruucyadooda.
V10V20 TAXANAHA Vane bamka
Awoodda dareeraha Maroodiga: Bixi V10V20 taxanaha Haydarooliga Vane Pump, Waxaan samayn karnaa noocyo kala duwan oo bambooyin biyo ah oo leh qiimayaal warshadeed-tooska ah waxaanan leenahay heerar heer sare ah oo mashiinnada tijaabada ah si ay uga caawiyaan macaamiisha mashruucyadooda.